रुसी सेना युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर छिरे, के छ पछिल्लो अवस्था ? — Imandarmedia.com
रुसी सेना युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर छिरे, के छ पछिल्लो अवस्था ?
एजेन्सी। रुसी सेना युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभ प्रवेश गरेको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। खार्किभ क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख ओलेग सिनेगुबोभले साना सैन्य सवारीहरू सहर छिरेको बताए।
यसअघि नै रुसी सैन्य कारहरू खार्किभको सडकमा गुडेका भिडिओहरू सार्वजनिक भएका थिए। सिनेगुबोभले सबै नागरिकलाई घरभित्रै रहन भनेका छन्। आफ्नो वासस्थान नछोड्नुहोस्। युक्रेनको सशस्त्र सेनाले शत्रुलाई पराजित गर्दै छन्।
नागरिकहरूलाई सडकमा ननिस्कन अनुरोध गरिएको छ। यसअघि उत्तर–पूर्वी सहर खार्किभको एक नौ तले भवनमा रुसी रकेट आक्रमण हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको राज्य आपत्काल सेवाले जनाएको थियो।
युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभलाई रुसले फेब्रुअरी २४ देखि नै निसानामा खारेको छ।उता राजधानी किएभमा भने बिहान ७ः३० सम्म रुसले कुनै आक्रमण गरेको छैन।
शनिवार राति आक्रमण हुनसक्ने चेतावनी दिइएको भए पनि त्यहाँको अवस्था शान्त रहेको नगर उपप्रमुख माइकोला पोभोरोज्न्याकले बताए। तेस्तै,पूर्वी युक्रेनमा रुसी सेनाले गरेको हमला र गोलाबारीमा कम्तिमा १९ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ।
आक्रमणमा कम्तिमा ७३ जना घाइते भएका छन्। अहिले रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किभलाई चारै दिशाबाट घेरा हालेर आक्रमण गरिरहेको छ।आक्रमणको चौथो दिन रुसी सेनाले किभलाई मुख्य निशाना बनाएको हो।
राजधानीमा गोलाबारी र ठूला बिस्फोटका आवाजहरु सुनिएको जनाइएको छ।किभसहितका क्षेत्रमा रुसले मिसाइल आक्रमणको तयारी गरेको भन्दै साइरन बजाइएको छ।
रुसबाट आउने मिसाइल ध्वस्त पार्नका लागि युक्रेनले एन्टी मिसाइल प्रणाली तयारी अवस्थामा राखेको छ। युक्रेनी सैनिकले आफ्नो रक्षा रणनीतिलाई अहिलेसम्म बलियो रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
तेस्तै, युक्रेनमा भएको रुसी हमलामा कम्तिमा २४० सर्वसाधरणको हताहत भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनका विभिन्न सहरहरुमा हमला गरिरहेको छ।
राष्ट्रसंघका लागि मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्त ओसीएचसीआरले युक्रेन हमलामा कम्तिमा २४० सर्वसाधारणको हताहत भएको जनाएको छ। घरहरू र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेकोले सयौं मानिसहरू पानी र बिजुलीबाट बन्चित भएको ओसीएचसीआर जनाइएको छ।
राष्ट्रसंघका अनुसार १ लाख ६० हजार युक्रेनी आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्न लागिरहका छन्। रुसी हमलामा ५० लाख मानिस शरणार्थी बन्न सक्ने युक्रेन सरकारको अनुमान छ।
राजधानी किभभन्दा बाहिरी सहरमा रहेको भासीलकिभस्थिते तेल डिपो रुसी आक्रमणमा प्रभावित भएको छ। गोलाबारी र बम हमलामा क्षतिग्रस्त सो डिपोबाट विषालु धुँवा निस्किरहेको भन्दै राष्ट्रसंघले मानिसहरुलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरेको छ।
राजधानी किभका बासिन्दाहरु यसअघि नै ज्यान जोगाउन भूमिगत आश्रयमा शरण लिइरहेका छन्। युक्रेनले गएको २४ घण्टामा आठ सय रुसी सेना आफ्नो कारवाहीमा मारिएको दाबी गरेको छ।
युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सो संख्यामा रुसी सेना आफ्नो कारवाहीमा मारिएको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार ३० ट्यांक, सात युद्धक विमान र ६ हेलिकप्टर पनि सोही अवधिमा ध्वस्त बनाइएका छन्।
यस्तै रुसले बिहीबारदेखि थालेको आक्रमणमा हालसम्म १३७ युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएका छन् भने ३१६ घाइते भएका छन्। एनबीसी न्युजका अनुसार आज युुक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु हुनेमा ४० युक्रेनी सेना पनि छन्।
पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा रहेका विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गर्दै औपचारिक रुपमै युक्रेनमा सैन्य कारवाही थाल्न आफ्ना सेनालाई निर्देशन दिएपछि युक्रेनको राजधानीसम्मै आक्रमण भइरहेका हुन्।
उता युुक्रेनमाथि आक्रमण सुरु भएपछि विश्व समुदायले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। रुसले तेस्रो पक्ष आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आइपुुगे उसलाई पनि आफूले नछाड्ने चेतावनी दिएको छ।युक्रेनले १८ देखि ६० वर्षसम्मका नागरिकलाई देश छाड्न दिएको छैन।
उनीहरुलाई हतियार उठाउन त्यहाँको सरकारले आह्वान गरेको छ। सोभियत संघको पतनपछि सन् १९९१ मा युक्रेन रुसबाट अलग भएको थियो। त्यसयता युक्रेनले पश्चिमा राष्ट्रसंग लगातार सम्बन्ध बढाएको छ जुन रुस रुचाउँदैन।